को Rendezvous के हो? विभिन्न परिभाषाहरू
को Rendezvous के हो? यो मिति जस्तै हो। उनि एक घनिष्ठ सम्बन्ध वा विवाह को लागि साझेदार हुन उपयुक्ततामाथि लागि विपरीत सेक्स को मूल्यांकन राम्रो कसरी केन्द्रित सामाजिक अन्तरक्रिया एक रूप छन्। यो शब्द मूल्यवान छ। तर सामान्यतया यो एक जोडी रूपमा विपरीत सेक्स को मान्छे भेला कार्य हो।
सामाजिक सम्बन्ध एक तत्व रूपमा Rendezvous
मिति अनावश्यक विभिन्न देशहरूमा फरक अगाडि बढ्न सक्छ। यो त विवाह आउँछ, विवाहपूर्वको को अवधि characterizes, र अक्सर संलग्नता एक precursor कार्य गर्दछ। तर, संलग्नता अवधि यस ढाँचा श्रृंखला को भाग हुन सक्दैन। कहिलेकाहीं यो हुन्छ, त्यस मिति विवाह गर्न नेतृत्व गर्दैन।
छैन आवश्यक घनिष्ठ सम्बन्ध दुई मान्छे एक जोडी रूपमा अस्तित्व मा हुन्छन्। त्यसको विपरीत, मुख्य उद्देश्य एक निर्धारण छ मनोवैज्ञानिक अनुकूलता सम्बन्ध निर्माण गर्न निर्णय गर्ने दुई मान्छे को। यो सुविधा सबै भन्दा साधारण अर्थमा छ, तर यो विवरण देश आधारमा मात्र विस्तृत गर्न सकिन्छ, तर पनि subculture। त्यसैले, नमस्ते प्रक्रिया मा शास्त्रीय दृष्टिकोण फरक हुन सक्छ। एक विशेष धार्मिक समुदाय को नै स्वतन्त्र।
एक संक्षिप्त इतिहास
मानिसजातिको इतिहास को पाठ्यक्रम तुलनामा एक Rendezvous के हो? यो केवल केही शताब्दीपछि पहिले समाज मा एकीकृत गर्न शुरुवात डेटिङ को विचार रूपमा, धूलो एक स्पेक छ। मान्छे बीचको सम्बन्ध परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यो intersexual सम्बन्ध र कुनै पनि अन्य दुवै लागू हुन्छ। तर पहिलो श्रेणी एकल स्थिर द्वारा विशेषता छ - एक घनिष्ठ सम्बन्ध प्रवेश गर्न इच्छा, र अन्य सबै सामाजिक superstructure ठीक सबै भन्दा राम्रो साथी निर्धारण उद्देश्य छन्। यो निरन्तर परिवर्तन गर्दैन त्यसैले प्रकृतिका जैविक छ, र।
यो आनुवंशिक कार्यक्रम procreation उद्देश्य। प्रकृति मा एक Rendezvous के हो? उनको छोराछोरीलाई राम्रो बुबा वा धेरै राम्रो आमा को लागि यो खोजी। यो यस आनुवंशिक कार्यक्रम जीवन मा एकीकृत छ जसमा तरिका हो।
व्यवहार मा Rendezvous
देश, वर्ग, उमेर, धर्म, यौन झुकाव: त्यहाँ भ्रमणमा को पाठ्यक्रम प्रभावित धेरै सामाजिक चर छन्। सही पनि हुनत माथि दिइएका सबै सुविधाहरू पनि अधिकार मिति मा आधा प्रत्येक निहित असर, लिङ्ग प्रभावित छ। उदाहरणका लागि, समाज सामेल यौन सम्बन्ध केटाकेटीलाई निषेध गरिएको छ, त्यसैले एक केहि परिमार्जन फारममा किशोरों मा आनुवंशिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ।
उदाहरणका लागि, धेरै मान्छे के एक रात Rendezvous रुचि राख्नुहुन्छ। यो 10 बजे पछि मात्र राति आयोजित जो सामान्य बैठक छ। यो उदाहरणका लागि, सामाजिक नियम मा एक Rendezvous किशोरीहरूको व्यवस्था गर्न असम्भव छ, र पनि धेरै धार्मिक समुदायमा यस्तै मिति alertness सक्छ।
साथै, मानिसहरूलाई जीवन के एक Rendezvous रुचि राख्नुहुन्छ। पहिलो नजर मा यो उखान केही दयालु हुन्छ, तर वास्तवमा यो फिल्म शीर्षक छ कि जस्तो लाग्न सक्छ। बरु, यो खिच्नुभयो एनिमे थियो जो एउटै नाम को आधार मा विधा प्रकाश उपन्यास श्रृंखला हो। अझै धेरै जीवन दावी छ कि एक अज्ञात घटना - यो श्रृंखला चलचित्र "स्थानिक दरार" को घटना अघि, 30 वर्ष पहिले किनभने के भयो को 150 मिलियन मान्छे को विनाशको कथा बताउँछ।
यो घटना पछि, यस्तै "स्थानिक गल्तीलाई", कम तीव्र albeit, जापान भन्दा सबै देखा पर्न थाले। धेरै मानिसहरू तिनीहरूलाई जो एक केटी TOKA छ अर्को आयाम देखि प्राणीहरू को उद्भव को harbingers विचार गर्नुहोस्। यी स्थानिक गल्तीलाई को घटना को लागि जिम्मेवार छ। जल जोगिन गर्न नै यो प्रेम गिरावट, - को protagonist उद्देश्य।
बाइसेप: कार्य, संरचना। स्वैच्छिक आन्दोलनहरु को बाइसेप द्वारा शासित छन्?
मिथक - यो के हो? मूल र प्राचीन र आधुनिक मिथक उदाहरणहरू
भौतिक: वर्ग सुरु के गर्ने? के भौतिक पाठ सिकाइएको छ
सेन्ट पीटर्सबर्ग ठेगाना, समीक्षा, ज्ञात चेलाहरू दोस्रो जिम
यस कोणको साइन को व्युत्पन्न नै कोण को कसाइन बराबर छ
प्राकृतिक ग्याँस: सूत्र। रासायनिक सूत्र ग्याँस। प्राकृतिक ग्याँस को सबै प्रकार
औषधीय बिरुवाहरु। नागफनी बढ्छ वा दबाब घट्छ?
आफ्नो हातले मिल मा बना भयो-अखंड छत
पर्यटकहरु चासोको विषय हुन सक्छ कि जर्मन ड्रेस्डेन संग्रहालय
के आनुवंशिक रोगहरु गराउँछ
Crossovers "माज्दा": समीक्षा र विनिर्देशों
ग्याँस बाध्य मस्यौदा एक बयलर लागि चिम्नी के हो?
के crochet गर्न सक्नुहुन्छ? crochet खिलौने: योजना। Crochet potholders: योजना
काठी ब्रूक्स: सुविधा र लाभ
Voidable र शून्य कारोबार: फरक, निहितार्थ र उदाहरण
AVM "Varfeys" कसरी पिट्न? Sniper राइफल्स AVM (AWM) "Varfeys" मा: सुझावहरू
Serdyukov - रूस को हिरो: यो विश्वास गर्न सम्भव छ?
पतन मा आपतकालीन सहायता: कार्यहरू एक अल्गोरिदम